Umaki: i-ecommerce yeselula | Martech Zone
Umaki: i-ecommerce yeselula
Sihlanganise uhlelo lwemiklomelo futhi sathuthukisa ukugeleza kokuzenzekelayo okuningana futhi okuyinkimbinkimbi kwekhasimende le-e-commerce elikhuphule kakhulu imali engenayo. Njengoba siqhubeka nokubuka abasebenzisi begeleza besuka kuma-imeyili ngokuguqulwa, sikhombe izingqinamba eziningana ngokusingathwa kwabo nengxenyekazi ebithinta kakhulu isivinini sesiza - ikhungathekisa amakhasimende abo abangahle abe khona futhi eshayela namanani okushiya phezulu - ikakhulukazi kumadivayisi eselula. Kungani Izindaba Zokushesha Kwekhasi Kuhle ukusebenza kwezentengiso
NgoMsombuluko, Julayi 17, 2017 NgeSonto, ngoJuni 10, i-2018 Douglas Karr
Ngaphandle kokukhuphuka kokusetshenziswa kwamaselula, amawebhusayithi amaningi aletha ulwazi olubi lwamaselula, ephoqa abathengi abangaba khona ukuthi bangabikho. Abanikazi bamabhizinisi abasanda kufunda ukuzulazula esikhaleni sedeskithophu bakuthola kunzima ukwenza ushintsho kuselula. Ukuthola ubuhle obulungile kukodwa kungaba yinkinga. Abanikazi bamabhizinisi kufanele basebenze kanzima ukuze baqonde izithameli zabo ezibhekiswe kubo futhi bakhe ukwakheka kwabo nokuklama kwabo kumuntu womthengi. Ukuheha abathengi abangahle kuhlale kulula ukusho
Ngokusho kukaStatista, ngo-2016, abantu abayizigidi eziyi-177.4 basebenzise amaselula ukuthenga, ukucwaninga nokubhekabheka imikhiqizo. Lesi sibalo kulindeleke ukuthi sifinyelele cishe ezigidini ezingama-200 ngonyaka ka-2018. Futhi umbiko omusha owenziwe ngu-Addressy ubalule ukuthi ukulahlwa kwenqola kufinyelele ezingeni eliphakathi kuka-66% e-US. Abathengisi abaku-inthanethi abanganikeli ngesipiliyoni esihle seselula kungenzeka baphuthelwe yibhizinisi. Kubalulekile ukuthi bagcine abathengi bebandakanyekile kuyo yonke inqubo yokuphuma. Ngezansi
Besisebenza nesitolo sevithamini nesengezo ku-inthanethi ukusiza ukukhulisa ukubonakala kosesho lwabo namazinga wokuguqulwa. Ukuzibandakanya kuthathe isikhathi esincane nezinsizakusebenza, kepha imiphumela isivele iqala ukukhombisa. Isiza besidinga ukwakhiwa kabusha futhi sakhiwe kabusha kusuka phansi kuya phezulu. Ngenkathi bekuyisayithi elisebenza ngokugcwele phambilini, belingenazo izinto eziningi ezidingekayo zokwakha ukwethembana nokwenza lula ukuguqulwa okulandelayo
Ukuthathwa Kwentengiso Yeselula
ULwesithathu, May 14, 2014 ULwesibili, May 13, 2014 Douglas Karr
Amafoni omakhalekhukhwini abekade engajwayelekile kithina sonke, kepha manje aseyindawo ejwayelekile. Ama-Smartphone athuthuke kakhulu futhi asebenzisana kakhulu kunakuqala, futhi kusekhona okwenzekayo okusha nokuthokozisayo okuqhubekayo ezinkampanini eziningi ezinkulu. Uma kukhulunywa ngokufaka uphawu lokukhangisa nokukhangisa kubalulekile ukwazi ukuthi ungazifinyelela kanjani izethameli ezingamaselula futhi nabasebenzisi bekhompyutha bazi kahle kamhlophe. ISurge Digital ize ne-infographic entsha